राउटेले बुझे 'पहिलो तलब'
२९ फागुन । घुमन्ते राउटे समूदायका पाँच जनाले पहिलो पटक बैंकबाट तलब बुझेका छन् । सामाजिक सेवा केन्द्र सोेसेकले गत फागुन १२ गते उनीहरुलाई सामाजिक कार्यकर्ताको रुपमा नियुक्त गरेका थियो । समूदायका सूर्यनारायण शाही, डिलबहादुर शाही, बीरबहादुर शाही, प्रकाश शाही र मैनबहादुर शाहीले…
वीरेन्द्रनगरबासीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? सेवाप्रवाहका जटिलता के हुन् ?
वीरेन्द्रनगरका जनताको स्वास्थ्य अबस्था कस्तो छ ? मुख्य समस्याको रुपमा के के समस्या देखीएका छन् ? अन्य क्षेत्रको तुलनामा वीरेन्द्रनगरको स्वास्थ्य समस्या मध्यम खालको नै छ । बिरामी परेपछि औषधी उपचार समयमै गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाका कारण पनि यहाँका जनताहरुमा त्यती ठुलो समस्या देखीएको छैन…
पीडाको दलदलमा हिरा, सहयोगको अपिल
तस्बिर : रामचन्द्र घर्ती २९ फागुन । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर १३ निवासी हीरा बस्नेतको जन्मजात दुबै खुट्टा अस्वभाविक थिए । नचल्ने र लुला अवस्थाका छन् । तीन दाई र दुई दिदी पछि परिवारकी कान्छि छोरी हिरा शारिरिक रुपमा असक्त छिन्…
चिन्दै नचिनेको व्यक्तिलाई अदालतले पति बनाइदिएपछि ..
२७ फागुन । कानुनले कुनै महिलाको श्रीमान फेरिदिन सक्छ कि सक्दैन? दाङमा एक वर्षअघि त्यस्तै भयो। दाङ जिल्ला अदालतले २०७४ जेठ २९ गते निरमाया पुनको श्रीमान फेरिदियो। ३७ वर्षीया निरमाया बाग्लुङ, जैमनी नगरपालिका-१० का प्रेमबहादुर पुनकी पत्नी हुन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चुरामन…
डिजिटल कर्णाली बन्नेमा मुख्यमन्त्री आशावादी
तस्बिर: कुइक खबर फागुन २४ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही कर्णाली प्रदेश डिजिटल प्रदेश बन्नेमा आशावादी भएको बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबारदेखि शुरु भएको क्यान इन्फोटेकको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारले यस प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने…
नेकपा नेता भरतमोहन र रविन्द्र अधिकारीको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली सभा (भिडियो)
२३ फागुन । नेकपाको आयोजनामा ताप्लेजुङ हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सहित सात जना र पुर्व उप-प्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गरेको छ । सभालाई प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा…
मौलिकता झल्काउने चैतलो पर्व (फोटो कथा)
२१ फागुन । चैतलो पर्वमा महिलाले चैतलो अर्थात देउडा खेल्दा परम्परागत पहिरन तथा पुराना लोभ हुन लागेका बहुमुल्य गहानामा सिङ्गारिएर पहेलो कपडा लगाउने गर्दछन् । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका वडा २ स्थित साविक ठेहे गाविसमा हरेक वर्षको फागुन १२ र १३ गते यो मेला…
हिमपातले मरे भेडाबाख्रा
फागुन १९ । निरन्तर हिमपातका कारण जुम्ला सिंजा गाउँपालिकाको पाटनमा सयौं भेडा बाख्रा मरेका छन् । निरन्तरको हिमपातले हिउमा कठ्यारिएर सिँजा गाउपालिका २ का गोबिचन्द्र तिरूवाका ५१ वटा भेडा मरेका हुन् । घोडिङ्गा पशु ब्यवसायिक हिमाली भेडापालन ब्यवसायिक आयोजनाको सहयोगमा तिरूवाले भेडा पालन…
डा. तिमिल्सेनाको 'अदातल भित्र, अदालत बाहीर'को बिमोचन
१४ फागुन । डा. रामकृष्ण तिमिल्सेनाको अदालत भित्र र अदालत बाहिरको बिमोचन भएको छ । सर्वोच्चका पूर्व रजिष्ट्रार समेत रहेका तिमिल्सेनाले लेखेको पुस्तकलाई पूर्व राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले बिमोचन गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राष्टपति यादवले यो पुस्तक कानुनका विद्यार्थी र…
पञ्चपुरी सांस्कृतिक महोत्सवको उद्घाटन
१४ फागुन । पञ्चपुरी सांस्कृतिक महोत्सव २०७५ को उद्घाटन भएको छ । महोत्सबको उद्घाटन कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद यज्ञ बहादुर बिसीले गरेका हुन् । महोत्सबको उद्घाट्न गर्दे सांसद बिसीले पश्चिम सुर्खेतमा रहेका विभिन्न पर्यटकीय,सामाजिक सांस्कृतिक भेषभुषा संरक्षण र आर्थीक विकासमा महोत्सवको महत्त्वपूर्ण भुमीका रहने…